Yakha intengiso yakho yesiqulatho ngokuchonga ezi zithuba zintandathu | Martech Zone
Ndonwabe ngokwenza i-webinar izolo njengenxalenye ye INtlanganiso yangoku yeQeqesho lokuThengisa uMxholo. Usenokubhalisa simahla, ubukele ukurekhodwa, kwaye ukhuphele iincwadi kunye nemiboniso. Isihloko sam esithile sikwisicwangciso esele sisebenza nabathengi bethu kule minyaka imbalwa idlulileyo- Ukuchonga izikhewu kwisicwangciso sabo somxholo ezinceda ukuba bakhe igunya kunye nokuqhuba uguquko.
Ngelixa umgangatho womxholo ubaluleke kakhulu kwimpumelelo yabathengi bethu, akusengombuzo yimalini umxholo wokubhala. Bonke abathengi bethu bayaqonda ukuba ngoku bangabapapashi. Umbuzo omtsha ngulo mababhale ntoni. Umsebenzi wethu kukufumana izikhewu kwizicwangciso zomxholo wabathengi kunye nokuphuhlisa izisombululo ezizalisa ngcono ezo zikhewu.
Kubathengi bethu abakhulu, abanegumbi leendaba liphela, ayisiyonto ilula leyo. Singenisa ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeerekhodi veki nganye kwinjineli eyakhiweyo eyenzelwe kunye nedatha enkulu esiyakhe apho sinokusika kunye nokukhangela idayisi, kwezentlalo kunye kubahlalutyi idatha ngokukhawuleza ukuba ichonge amathuba. Kwibhlog yethu, kulula kancinci. Siphonononga izixhobo zethu kwaye senze uphando rhoqo ngenyanga ukufumana amathuba. Nalu ulwahlulo:
Ukufumana iZikhewu kwisiCwangciso sakho soMxholo
Uphicotho lwemibuzo kunye neempendulo -Jonga iifolda zakho ezithunyelweyo (ngakumbi uphuhliso lweshishini / iqela lakho lokuthengisa). Ukuhlalutya eyam ifolda ethunyelweyo, ndihlala ndifumana imibuzo ebuzwa ngabaxumi bethu kunye nethemba. Ukuba abathengi bakho kunye nethemba bayabuza, amathuba okuba abantu baphanda kwaye bafuna olo lwazi kwi-intanethi.
ukhuphiswano - Luluphi uluhlu lwabathengi bakho kule nto ufuna ukuyenza? Nazi izixhobo ezinkulu kwimarike apho unokuchwetheza ngokulula kwi-domain yabo kwaye uza noluhlu lwamagama aphambili abawabeka kwinqanaba- kunye namaphepha asemgangathweni. Kulungile, unokuchwetheza i-domain yakho kwaye ujonge kweminye imimandla enamagama aphambili. Le yindawo yokugcina ulwazi!
ekwizinga - Intoni iindlela zokukhangela Ngaba kwenzeka ngala magama aphambili ngokuhamba kwexesha? Oku kwenza ukuba ukwazi ukucwangcisa ikhalenda yonyaka esebenzayo-ukufumana elona xesha lilungileyo lokucwangcisa umxholo wakho. Ukuba unqwenela ukuyithatha inotshi, sebenzisa ikhalenda yokuhlela- Kapost, Ishedyuli kwaye Hlela ukuhamba yeWordPress, Isihlomelo kwilifu lokuThengisa le-Oracle bambalwa.
Imigaqo ehambelana noko - Ayisiyiyo nje malunga nokuba yintoni nina thengisa, imalunga nabaphulaphuli kunye noluphi ulwazi bona bafuna. Chwetheza igama elingundoqo kuGoogle kwaye ujonge i-footer yophendlo lwakho malunga namagama ahambelana noko. Sebenzisa isixhobo esinjenge-WordTracker kwaye unokucoca ulwelo oluqhelekileyo lwemibuzo esetyenziswa ngabantu.
Imixholo yendawo -Ukubeka indawo ekuhlaleni ayikuthinteli kwinqanaba lesizwe okanye elamazwe aphesheya! Thetha malunga namashishini kunye neendawo ezikudidi ngokwengingqi kwaye uhlala ufumana isikhundla sakho kwimigaqo ebanzi engeyiyo eyendawo. Phumelela kwindawo yakho kwaye uya kuqhubeka ukwandisa impembelelo yakho ngaphaya kwesixeko sakho okanye ilizwe okhonza kulo.
Nika ixabiso -Izicwangciso-qhinga ezininzi kakhulu zomxholo zijolise kuphawu, imveliso okanye inkonzo. Umxholo wakho kufuneka ujolise kubaphulaphuli bakho. Ukunceda abaphulaphuli bakho baphumelele kuya kuqinisekisa ukuthembana kunye negunya lakha umfutho-okhokelela kuguquko. Yenza umxholo omkhulu kwimithombo ethembekileyo yokuqhubela phambili ukuzibandakanya. Ukuba uzama ukufikelela kwiingcali zentengiso, bonelela ngomnye umxholo omkhulu obanceda baphumelele. Ukuba uzama ukunceda abaninimzi, ukwabelana ngamanqaku anceda kuyo yonke into ukusuka kwi-inshurensi ukuya kutshintsho lokucoca ulungile. Umxholo akufuneki uhlale ungowokuthengisa.
Ngoku ukuba unezihloko ezintle oza kubhala ngazo, lixesha lokuba unyuse ukhuphiswano. Kufuneke u yandisa ukukhutshwa komxholo wakho kwaye ubhale ngcono kunokhuphiswano. Rhoqo oku kuthetha ukuya kwiinkcukacha ezinzulu, ukusebenzisa ukubonwa ngokukuko ngakumbi, kwaye kubandakanya ukuxhasa idatha okanye izingqinisiso. Sisoloko sikwenza oku ngokuphuhlisa i-infographics kunye namaphepha amhlophe kubathengi bethu, emva koko sibhale amanqaku aneenkcukacha aphumelele ukukhangela!
uhlalutyo -Hlahlela ukwakheka kwamaphepha aphumeleleyo, ulawulo lwendawo, iindlela ezingena ngaphakathi, izihloko, izihloko kunye nemixholwana ukuze uphuhlise iphepha elilunge ngakumbi. I-infographics kunye neevidiyo ziyamnandi koku.
Ukwabelana -Qiniseka ukuba iphepha lakho linokwabiwa ngokulula, lisebenzisa ngokufanelekileyo ii-microformats kunye namaqhosha okwabelana noluntu ukwandisa ukufikelela kwayo.
Khuthaza -Ntengiso ejolise kwintengiso yokuqinisekisa ukufikelela kulowo ukhuphisana naye.
tags: iimpenduloabaphulaphuliIxabiso lokwakhaUhlalutyo lomxholo wokhuphiswanoUkuThengiswa kweMpahlaiziqulatho zomxholoumxholo womxhologooglechonga izikhewuumxholo osekwe kwindawointetho yentengisointshumayeloimibai slidediumxholo oxabisekileyoinani